इंग्ल्यान्डको यू-१९ राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा अस्मिता आले को हुन ?::देश र जनताप्रति समर्पित
इंग्ल्यान्डको यू-१९ राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा अस्मिता आले को हुन ?
पोखरा- इंग्ल्यान्डको यू-१९ राष्ट्रिय महिला फुटबल टिममा नेपाली मुलकी चेली अस्मिता आले मगर परेकी छिन् ।
युइएफए वुमन्स यू-१९ च्याम्पियनसिप छनोटका लागि इंग्ल्यान्डको टिममा नेपाली मुलकी अस्मिता परिन् तर छनोटको पहिलो खेलमा साइप्रसविरुद्ध खेल्न भने पाइनन् ।
पहिलो पटक इंग्ल्यान्डको टिममा परेकी १७ वर्षीय अस्मिता एस्टन भिल्लाबाट खेल्दै आएकी छिन् । पहिलो खेलमा बेन्चमै विताएपनि अस्मिताको टिम इंग्ल्यान्डले साइप्रसलाई ८-० गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्‍यो ।
अब इंग्ल्यान्डले बेलारुस र सर्वीयासँग खेल्न बाँकी रहेको छ । यो दुबै खेलमा अस्मिताले खेल्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ । डिफेन्डर अस्मिता अमृत आले बसन्ती आलेकी छोरी हुन् । तनहुँमा स्थायी घर भएका अमृत आले क्वीन्स गोरखा सिग्नलका सैनिक हुन् ।